Bakunike Job incazelo / Imisebenzi And Duty Template - JobDescriptionSample.org
ekhaya / Akohlulwanga / Bakunike Job incazelo / Imisebenzi And Duty Template
Bakunike Job incazelo / Imisebenzi And Duty Template
Jacob Isilimela 28, 2016 Akohlulwanga 2 izimvo 720 Views
Fumana iminikelo okanye ukuthenga ngaphakathi ngomnxeba malunga izisombululo okanye urhwebo.
Skills Job Izidingo
Khupha kwezahlulo zengeniso ukulungele, ukufunda evela kwisicatshulwa ezicacisa iinkonzo okanye iimveliso, ukubonisa abathengi ukuba zingaba nokuba ukwenza isipho okanye ukuthenga inkonzo okanye imveliso.
ezihlola Iinkcukacha okanye abantu zobuqu ngefoni ukufumana ingeniso malunga iimveliso okanye izisombululo, okanye ukucela amalizo izizathu wesisa.
Cacisa imibuzo impendulo kubathengi, kunye neenkonzo kunye amazinga okanye iimveliso.
Fumana ulwazi client ezifana brand, phatha, kunye indlela ngokosuku , kwaye ufake izicelo zibe computer.
Iimpendulo ngamathuba, iinkcukacha, ukuzuza, kunye zokurekhoda nabo.
Lungisa iinkqubo yokuthengisa iinkanuko ekujoliswe wamvusa kunye neemfuno abantu ezizodwa.
Ukufumana amagama kunye iintlobo yomnxeba basenokuba ngabaxhamli evela kwimithombo efana sites zefowuni, amakhadi impendulo magazini ethengwe iinkampani ukuba eyahlukileyo.
iminxeba Phendula phone kubathengi bakuthathe abaye uceliwe ngokusebenzisa izibhengezo-ntengiso.
Yefowuni okanye amagama kanje ukuba uyiphendule unxibelelwano oluvela abathengi okanye ukulandela-up yokuqala nabazana yokuthengisa.
Gcina idatha abahlobo, iingxelo, kunye nemiyalelo.
Utyelelo kwesiqhelo malunga abameli yokuthengisa ukubahluthisa kunye nabathengi kutshata okanye malunga abathengi ukuba ulinde imiboniso ingeniso.
Industry okanye ukwenza uphando umxhasi ukufumana ulwazi malunga abathengi abangaba.
Occupation izinto Need
Ukufunda umxholo ebhaliweyo Ulwazi-Isicatshulwa kunye nemihlathi e ezinxulumene nomsebenzi amaphepha.
Active-Ukuphulaphula-To ntoni abanye abantu bathi ukunikela ingqalelo epheleleyo,, esebenzisa ixesha ukuba siqonde izinto ezakhiwayo, imibuzo ecela ngendlela efanelekileyo, kunokuba mesmerizing kwi izihlandlo ezingachanekanga.
Ukushicilela-In ukubhala kungekhona nje ezingamfanelanga iintswelo isihlwele uthetha ngempumelelo,.
Ukuthetha-Ukuthetha nabanye ukuba ukwabelana izibakala ngempumelelo.
Maths-Isebenzisa izibalo, ukusombulula iingxaki.
iindlela Science-Ukusebenzisa imithetho zeteknoloji ukuze bacombulule iingxaki.
Criticalthinking-Ukusebenzisa ingqiqo yaye ndacinga ukuba ebuntwini kunye iingenelo izisombululo ezizezinye, izigqibo okanye iindlela iingxaki.
Active Learning-ukusiqonda ukubaluleka iinkcukacha kukhiwa malunga zombini ekhoyo ingxaki elizayo iingxaki kwezigqibo.
Ukufunda Strategies-nokusetyenziswa nokuzithatha iindlela teachingANDtutorial kunye neenkqubo ezazibonisa imeko eyalela okanye xa ukuqonda izinto idlamkile.
Ukukhangela-MonitoringPERDetermining ukusebenza ngokwakho, abanye abantu, okanye imibutho cinga amanyathelo olungiso okanye ukwenza intuthuko.
Social Perceptiveness-Ukwazi kwabanye’ iimpendulo kuba benza ukuba kutheni usabela nokuqonda.
Uququzelelo-Ukutshintsha amanyathelo malunga kwabanye’ ukuziphatha.
Marketing-ekukholiseni abanye ukuba atshintshe iintloko okanye ukuziphatha kwabo.
ZokuHlala-Ukubonelela abanye ngokudibeneyo kwaye uzame axolelanise ombane.
Sokuyalela-Ukufundisa abanye indlela athathe amanyathelo.
Orientation-Ukuthatha Service befuna iindlela ukuxhasa abantu.
Advanced ukusombulula iingxaki-Ukumisela imiba phambili kunye nokuphengulula ulwazi olufanelekileyo ukuphuhlisa ingqalelo okunokwenzeka ukusebenzisa izinketho.
Iinkqubo iimfuno ngumba imveliso Evaluation-Ukufundisisa ukwenza uyilo.
Technology Design-Ukuseka izixhobo okanye ukwenza kunye nobuchwepheshe ukusebenza umsebenzisi ufuna.
Gear Ukhetho-isigqibo uhlobo kwezixhobo kunye nezixhobo ezifunekayo kakhulu ukwenza umsebenzi.
Yezavenge-ekufakeni kweentambo, models, izixhobo, okanye uceba ukuhlangabezana specs.
Programming-Ukuvelisa iipakethe kwikhompyutha ukulungiselela iinjongo ukuba baninzi.
Operation Tracking-Watching ezinye iimpawu, khwlzleyo, okanye uvavanyo ukuze siqiniseke kukho izixhobo ezisebenza ngokufanelekileyo.
Inkqubo kunye Phatha-Ukuthintela imisebenzi isixhobo okanye izixhobo.
Izixhobo Ulondolozo-Ukwenza eso kuyinto eqhelekileyo kwi gear isigqibo nini kwaye yintoni uhlobo zokukhwelisa kuya kuba yimfuneko.
Zokusombulula-Ukucacisa izizathu iimpazamo zokusebenza isigqibo oko ulwalathiso ukuya ngayo.
Bayisebenzisela-Ukulungisa isixhobo okanye izixhobo usebenzisa izixhobo ezifunekayo.
Umgangatho Wolawulo Examination-Ukuqhuba uhlolo kunye nohlolo izinto, iinkonzo, okanye imisebenzi kugweba umgangatho okanye ukusebenza.
Isigwebo and Decision-Making-Ukucinga iindleko jikelele kunye neenzuzo izinto zingaba ukuba ukhethe lowo afanelekile kakhulu.
Systems Analysis-isigqibo luni na indlela kufuneka zisebenze kunye nendlela utshintsho kwimisebenzi, izifo, kananjalo indawo iya kuba nefuthe kwiziphumo.
Systems Analysis-Ukuchonga iindlela okanye amaza yokusebenza kwenkqubo kunye nokuziphatha ezifunekayo ukuze kunyuswe okanye ukusebenza echanekileyo, ngokungqinelana neethagethi kumatshini.
Timemanagement-Ukulawula kabani isihlandlo kunye sihlandlo kwabanye.
Administration of Savings-isigqibo ngendlela iidola Kungekudala kuza wachitha ukufumana umsebenzi, nentengiso ezi inkcitho.
Ulawulo Content Iindlela-Ukufumana nokubona ukuba ukusetyenziswa eyiyo iimpawu, izixhobo, kunye nezinto ezifunekayo kakhulu ukwenza umsebenzi okhethekileyo.
abantu Ulawulo Abasebenzi Resources-phambili ngenxa yokuba, ekuphuhliseni, kanye umsebenzi idolo, yokwahlula abantu phezulu ukuba umsebenzi.
uqeqesho Isiqinisekiso Experience Isiqinisekiso
Level High-School (okanye kuGedaliya okanye iSatifikethi ukulingana High School)
Ngaphantsi kwe Diploma High School
Iinkqubo ezininzi College
Job Authority Qualification Skills
ukuzimisela – 89.30%
Cooperation – 88.10%
Ukukhutshwa Abanye – 78.46%
Ulungelelaniso Social – 76.31%
Ukuzibamba – 85.22%
ukwethembeka – 93.93%
Jolisa aspect – 93.27%
ukuthembeka – 94.09%
Intuthuko – 81.96%
Thinking kohlaziyo – 83.43%
Pingback: Would You Like A Job Where With Steady Internet To Stay? | | uphuma-ngaphantsi